Writing Contest စာမူ ပြိုင်ပွဲ « EcoBurma – travel to Burma / Myanmar
Writing Contest စာမူ ပြိုင်ပွဲ
EnglishčeštinaDeutsch	Promoting Responsible Travel to Burma
Burma Center Prague နှင့် ၀ဿန် ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တို့မှ ပူးပေါင်းကျင်းပသော စာမူပြိုင်ပွဲတွင် ပါဝင်ရန် ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
“ခရီးသွား လက်ကမ်းစာစောင်များရဲ့ ဟိုမှာဖက်ကမ်းက မြန်မာနိုင်ငံ”
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေတွေဟာ အရှိန်အဟုန် ပြင်းစွာနဲ့ ပွင့်လင်းလာတဲ့ အနေအထား ဖြစ်လာနေပါတယ်။ အရင်တုန်းကထက်များတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေဟာ မြန်မာပြည်ထဲကို ၀င်လာနေကြပြီး ဒီအထဲမှာ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ သူမတူတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို စူးစမ်းခြင်းတဲ့၊ စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေ၊ ပျက်စီးယိုယွင်းမှုမရှိသေးတဲ့ သဘာဝအလှနဲ့ အားလပ်ရက်ကို ကုန်လွန်စေတဲ့သူတွေ၊ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ တွေ့ဆုံခြင်တဲ့သူတွေ၊ သူတို့ရဲ့ နေ့စဉ်ဘ၀တွေကို သိချင်တဲ့သူတွေ၊ တကိုယ်တော် ကျောပိုးအိတ်တလုံးနဲ့ ခြေဆန့်ချင်သူတွေ၊ စီးပွားရေး ရင်းနှီးမြုပ်နှံဖို့ကိုပဲ သီးသန့် စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်တနံတလျား ဒီလိုခရီးသွားတဲ့သူတွေဟာ ဒီလိုနိုင်ငံခြားသားတွေချည်းပဲတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေထဲကပဲ တခြားမြို့ရွာတွေကိုသွားပြီး အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရှာဖွေတဲ့သူတွေ၊လူနေမှု အခြေအနေ မြင့်မားဖို့ ကြိုးစားနေသူတွေဟာလည်း ပြည်တွင်းမှာ လှည့်လည်နေကြပါသေးတယ်။ တဖက်မှာလည်း ပြည်ပကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ရောက်နေကြတဲ့ သန်းနဲ့ချီတဲ့ မြန်မာပြည်သားတွေဟာလည်း ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို ပြန်လည်ပတ်ဖို့၊ ပြည်တွင်းမှာ ကျန်နေရစ်တဲ့ မိသားစုဝင်တွေနဲ့တွေ့ဖို့ မြန်မာပြည်ထဲကို တဖွဲဖွဲ ၀င်လာနေတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။
မြန်မာပြည်ကို ခရီးထွက်တယ်၊ မြန်မာပြည်ထဲမှာ လှည့်လည်သွားလာတယ်ဆိုတာဟာ ခရီးသွား ကုမ္ဗဏီတွေက ပေးတဲ့ လက်ကမ်းစာစောင်တွေ၊ ခရီးသွား ကုမ္ဗဏီတွေက ရောင်းတဲ့ ခရီးစဉ်တွေထက်မက ပိုမိုတဲ့ ခရီးသွားတွေနဲ့ ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုတွေ ရှိနေပါတယ်။ နေရာတခုကနေ တခုကို ရွှေ့လျားသွားလာနေတဲ့ လူတွေဟာ သူ့ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို သစ်ဆန်းတဲ့ အဖြစ်အပျက်၊ မမျှော်လင့်ထားတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ တခါမှ မသိနားမလည်ခဲ့ဖူးတဲ့ အခြေအနေတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဒီလို ပြောင်းလဲမှုတွေဟာ များသောအားဖြင့် သာမန်သာဖြစ်တယ်လို့ ထင်မြင်ယူဆမှုတွေရဲ့ နောက်မှာ ပုန်းကွယ်နေတတ်ပြီး၊ ဒီပြောင်းလဲမှုတွေကို ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံခံစားရတဲ့သူတွေ၊ အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်သူတွေနဲ့ စူးရှတဲ့အမြင်ရှိတဲ့သူတွေ ကသာ ထင်ထင်ရှားရှား တွေ့မြင်တတ်ကြပါတယ်။
ဘယ်သူကမှ ဖွင့်ပြောလေ့မရှိတဲ့ ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မှန်တွေကို ရှာဖွေဖို့၊ ကိုယ် သိမြင်တွေ့ကြုံခံစားရတာတွေကို တခြားသူတွေကို တင်ပြနိုင်ဖို့ဆိုတာဟာ ကျွမ်းကျင်တဲ့ အရည်အချင်းရှိဖို့ လိုသလို သေသပ်စွာ စာစီကုံးပြီး တင်ပြတတ်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။
အကယ်၍ သင့်မှာ ခရီးသွားလာရေးရဲ့ သက်ရောက်မှုကြောင့် ကြုံရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို သူတပါးကို ပြောပြချင်တဲ့ ဆန္ဒရှိတယ်၊ အဲ့ဒီအချက်အလက်တွေကို စာစီကုံးပြီး တင်ပြလိုတယ်ဆိုရင် ဒီ စာမူပြိုင်ပွဲမှာ သင့်ရဲ့ အဖြစ်အပျက် စာမူကို တင်သွင်း ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ ဖိတ်ကြားလိုပါတယ်။
စာမူပြိုင်ပွဲအတွက် စာမူတွေပို့လို့ ရနေပါပြီ။ စာမူပို့ဖို့ ဒီနေရာ ကိုသွားပါ။
We invite you to joinawriting contest
organized by Burma Center Prague in cooperation with Wathann Film Fest:
“Myanmar beyond the travel brochure”
The country is opening up at an incredible speed. More foreigners are entering Myanmar than ever before, people who are interested in culture, in nature, in the experience ofavery different country, who come for unspoiled holidays, to meet its people and understand their lives, on their own or inapackage tour, or simply to do business.
But not only foreigners travel in Myanmar. Many people of Myanmar travel between different parts of the country to find work and better living conditions, and many of the millions of people living abroad have decided to travel back and visit their families.
Traveling to and in Myanmar encompasses much more than what you find in travel brochures and packages sold to tourists. The movement of people to other places always creates new, unexpected, and often less known situations. Many of them can only be seen by the experienced eyes of those who have learned to observe what is hidden behind the scenes or camouflaged amidst normality, and often only by those who are involved and affected themselves.
It takes not only special skills to find these untold stories and to observe the unseen realities, but also to find the right way to describe them inatext, to put them into the best possible form, and to let others understand and feel what they have not witnessed themselves or what they have overlooked.
If you feel that you have something to say about these things and if you find it easy to writeagood text, we cordially invite you to submit it to our contest.
စာမူတွေကို စိစစ်ဖတ်ရှုပြီးတဲ့နောက်၊ ခေါင်းစဉ်နဲ့မကိုက်ညီတဲ့၊ သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ သွေဖီနေတဲ့ စာမူတွေဟာ ပြိုင်ပွဲဆက်ဝင်ဖို့ မသင့်တော်ဘူးလို့ ဒိုင်အဖွဲ့က သတ်မှတ်လိုက်ရပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲဝင် စာမူတွေကို အများပြည်သူ ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်အောင် ပြသထားပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့ စာမူရှင်တွေကိုလည်း ပြိုင်ပွဲဝင်လို့ ကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပေးပါမယ်။ စာဖတ်သူအကြိုက်ဆုံးဆုလို အခြားသော ဆုမျိုးမပေးနိုင်တာကိုတော့ နားလည်ပေးစေလိုပါတယ်။
စာမူပြိုင်ပွဲ ဆုနဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့၊ ဒိုင်အဖွဲ့ဝင်တွေ အကြိုက်ဆုံး ဂုဏ်ပြုဆုတခုကို စက်တင်ဘာ ၉ ရက်နေ့မှာ သီးသန့် ထုတ်ဖော်ကြေငြာ ဆု ချီးမြှင့်ပါမယ်။
စာမူပြိုင်ပွဲမှာ စိတ်ဝင်တစား ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြသူ အားလုံးကို အထူး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
All entries were submitted for the category “fiction”.
Clown doctors in Myanmar
In Myanmar,anon-profit group named as clown doctor’s group was founded in February 2012. The purpose of this group is to cure the mind of child patients to be happy. At the present time, they perform their duties in Yangon Children General Hospital. So, they come to that hospital...	ဆောင်းလုလင်
ပြိုင်ပွဲဝင် ၀တ္တုတို ဆောင်းလုလင် မိုက်တယ်ဆိုတာ ဒီလိုလား ငထူကြီး ဒီနေ့ထောင်မှလွတ်ခဲ့သည်။ ငထူကြီးသည် သူ့တစ်သက်တာတလျှောက်လုံး ထောင်ထဲမှာသာ အချိန်ကုန်လွန်၍ ထောင်ထဲမှာပင် သေရလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်မျှော်လင့်ထားသူဖြစ်သည်။ ထောင်အာဏာပိုင်များက သူ့ကိုခေါ်ပြီး ယနေ့မှစ၍ ထောင်မှထွက်ခွင့်ပေးလိုက်ပြီဟု ပြောလိုက်သည့် စကားကို သူ့အား ငရဲသို့သွားစေဟု အမိန့်ချမှတ်လိုက်သည့်သဖွယ် ငထူကြီး ခံစားခဲ့ရ၏။ “ခုဆို ခင်ဗျားဟာ လွတ်လပ်တဲ့ သာမန်လူတစ်ယောက်ဖြစ်သွားပြီ၊ ခင်ဗျားအနေနဲ့အပြင်လောကမှာ လွတ်လပ်စွာ လှုပ်ရှားသွားလာနိုင်ပြီ၊ ဒီတော့ ကိုထူကြီး- ခင်ဗျားအနေနဲ့အတိတ်က ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ မိုက်ပြစ်တွေကို မေ့ပစ်လိုက်ပါ၊ မိုက်ပြစ်တွေရဲ့ ဒဏ်ကို ပေးဆပ်ပြီးပြီ၊ ခ၀ါချခဲ့ပြီးပြီလို့ မှတ်ယူပါ၊ အပြင်လောကမှာ လူသစ်စိတ်သစ်နဲ့ ရိုးသားတဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုလုပ်ပြီး...	ခရီးသွား လက်ကမ်းစာစောင်များရဲ့ ဟိုမှာဖက်ကမ်းက မြန်မာနိုင်ငံ
If you cannot read the font, download here the text as PDF. ဆရာမ ကြာအုန်းကြည်သည် စိတ်မပါ လက်မပါ ကျောင်းသို့ရောက်လာခဲ့သော်လည်း ပြာယာတခတ်ခတ် ဂနာမငြိမ် ဖြစ်နေလေ၏။ “ထူးပါဘူး ကျောင်းအုပ်ကြီးဆီ မျက်နှာပူပူနဲ့ သွားရဦးမှာပဲ” ဟု တီးတိုးညည်းကာ ခပ်မြန်မြန် သွားလိုက်၏။ကျောင်းအုပ်ကြီးရှေ့ရောက်သည်နှင့် မူမမှန်သူတို့၏ ထုံးစံအတိုင်း မျက်နှာတပျက်ပျက်နှင့် ရွံ့ကာတွန့်တုန်နေ၏။ “ဆရာမကြည် ဘာကိစ္စလဲဗျ” “ဟိုဟာ ဟို ဟို အမေ့ဆေးခန်းလိုက်ပို့ချင်လို့ နေ့တစ်ဝက်ခွင့် ယူ ယူ ……” “ရောဂါက တော်တော်ကြီးမယ်ထင်တယ် ခဏခဏပဲနော်” ဆိုသောစကား ကြားလိုက်သည်နှင့် ဆရာမ၏ မလုံသောအိုးက ပွင့်မလိုရှက်သွားပြီး...	မြှျောလငျ့ခွငျးကမျးပါး
If you cannot read the font, download the text here as PDF. ကားတဈစီးပွီးတဈစီးထိုးစိုကျလာကွပွီး စညျကားနသေောလူတှကေိုမွငျရတာ စိတျမသကျမသာနဲ့ပဲ ကြှနျတျော စိတျမကောငျးဖွဈလာ ရသညျ။ ရုပျရှငျရုံတှေ၊ စားသောကျဆိုငျတှေ၊ အပနျးဖွဥေယြာဉျတှမှောမြိုး စညျကားနရေငျတောငျ မုဒိတာပှားနမေိမှာပါ။ အခုတော့ အထူးကုဆေးရုံကွီးမြားမှာ အပူရုပျဟနျလုပျပွီးလာနကွေတာ ဘာရောဂါ ဘာဒဏျရာတှမှေနျးမသိပမေဲ့ သူတို့တှရေဲ့ရငျထဲမှာတော့ ဒုက်ခဝဒေနာ တှဟော တနျတူရညျတူရှိလိမျ့မညျဆိုတာ ကြှနျတျောတှေးကွညျ့လို့ရသညျ။ ဘာကွောငျ့ကိုယျခငျြးစာနိုငျလညျးဆိုတော့ ကြှနျတျော့မှာလညျး အပွငျးထနျဆုံးရောဂါတဈခု စှဲကပျနေ၍ဖွဈသညျ။ ဆေးကောငျတာမှာ ဆေးဝယျဖို့ရပျနသေော ကြှနျတေျာ့ကို ဆေးကောငျတာက ကောငျမလေးက ဂရုဏာသကျစှာ ကွညျ့လသေညျ။ သူမြားတှေ သနားဖှယျကွညျ့လြှငျ ကြှနျတျောမနတေတျပေ။ အထူးသဖွငျ့ မိနျးမတှေ ကွညျ့သောအခါဖွဈသညျ။...	နှလုံးသားမှ ခရီးသှားသဈပငျ
If you cannot read the font, download the text here as PDF. မငွေိမျးခမျြး(၁၀)တနျးအောငျသောအခါ ဒဂုံတက်ကသိုလျ၌ တကျရောကျပွီး အင်ျဂလိပျစာအဓိက ဘှဲ့ဖွငျ့ကြောငျးပွီးခဲ့သညျ။ ဘှဲ့ရပွီးသောအခါ မမေသေညျ ဆရာမဘဝမှ အငွိမျးစားယူပွီးသညျဖွဈ၍ သားအမိ နှဈယောကျ၏တာဝနျမှာ မငွေိမျးခမျြးအပျေါသို့ ကရြောကျလာသညျ။ ဒီလိုနှငျ့ မိမိ၏အခွအေနကေို နားလညျ သော သူငယျခငျြးဖွူစငျ၏အဈမသညျ Tourism ကုမ်မဏီတဈခု၌ ၀ငျရောကျလုပျကိုငျနရော ကုမ်မဏီ၌ ၀နျထမျး အသဈခနျ့ထားရနျရှိကွောငျး ဖွူစငျမှတဆငျ့ပွောရာ မငွေိမျးခမျြးလညျး အဲဒီကုမ်မဏီပိုငျရှငျအိမျ၌ အလုပျ လြှောကျလှာသှားတငျခဲ့သညျ။ ကုမ်မဏီပိုငျရှငျအနျတီမှ လူလိုသောအခါတှငျ မငွေိမျးခမျြးကို ပွနျလညျ ဆကျသှယျမညျဟုပွောပွီး လြှောကျလှာအားလကျခံထားလိုကျသညျ။ မငွေိမျးခမျြးလညျး မိခငျ၏တာဝနျကိုယူလိုစိတျကွောငျ့ အလုပျရရှိနိုငျရနျ...	Is that Foolishness?
Today, Nga Htu was freed from jail. Na Htu Gyi spent most of his life in the jail. He has expected that he would end his life in the prison. When the Prison Authority called him for informing his freedom from jail, he felt that he was sentenced to go...	Jury Prize
On6September 2012, we handed over €50 to Mr. Thuya Thwin in Mandalay as acknowledgment for his contribution to the contest. While two of the jury members recommended to cancel the jury prize since the small number of works that qualify in terms of the criteria makes it impossible...	Audience Rating
TitleVotesRatingJury Prize15.0Clown doctors in Myanmar134.4Is that Foolishness?54.0မြှျောလငျ့ခွငျးကမျးပါး43.8ဆောင်းလုလင်31.7နှလုံးသားမှ ခရီးသှားသဈပငျ00ခရီးသွား လက်ကမ်းစာစောင်များရဲ့ ဟိုမှာဖက်ကမ်းက မြန်မာနိုင်ငံ00